जनताको सडक दबाबलाइ बुझेर दलहरूले संसदबाटै राजासहित हिन्दूअधिराज्य फर्काउनु पर्छ - Ujyaalo Nepal
संसद् विघटनविरुद्धका मुद्दा संवैधानिक इजलासबाटै टुंग्याउनुपर्ने सरकार पक्षीय कानुन व्यवसायीको जिकिर
जनताको सडक दबाबलाइ बुझेर दलहरूले संसदबाटै राजासहित हिन्दूअधिराज्य फर्काउनु पर्छ
यसैक्रममा सनातन संस्कृति समाजले यही मंसिर २५ गते राजधानीको माइतीघरमण्डलामा विशाल विरोध सभा गर्दैछ । यस विरोध सभामा सहभागि हुन म सबै हिन्दूवादी, सनातन हिन्दू धर्मावलम्वीहरूमा हार्दिक अपिल गर्दछु ।
By ujyaalo	 Last updated Nov 26, 2020 878
तारानाथ लुइटेल ।
पछिल्ला दिनहरूमा राजसंस्था र हिन्दूराज्य पुनःस्थापनाको माग गर्दै सडकमा स्वतःस्फूर्त प्रदर्शनहरू बढन थालेका छन । मंसिर १० गते मात्र एतिहासिक नगरी जनकपुर र सुन्दर नगरी पाेखरामा “राजा आउँ, देश बचाउ” भनी युवा पिढीकाे जुलुसले नारा लगाउँदै र्याली गर्याे ! यसअघि बुटवल हुँदै बर्दिया, नेपालगञ्ज, अत्तरिया, वीरगञ्ज, विराटनगर र धनगढीमा यस्तै जनप्रदर्शनहरु भएका छन् ! ती सबै प्रदर्शनहरूमा अनपेक्षित विशाल जनसहभागिता रहेको पाइएको छ । नागरिकहरूको , खासगरी युवापुस्ताको सहभागिता विशाल , विराट देखिदै छ । यसप्रकारका विशाल प्रदर्शनहरू राजधानीमा पनि भैरहेका छन ।
याे नारा र माँग सरकारले अब संबाेधन गर्नुपर्छ । दलहरुले पनि असंगठित रूपमा नै सडकमा राजा र हिन्दूअधिराज्य माग्ने जनमतको कदर गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले जनमतको कदर नगर्ने हो भने त यो जनसागर सरकार र व्यवस्थालाइ नै बढार्ने बाढी बन्ने निश्चित छ । संसदले पनि सडकमा उर्लीरहेको जनताको बाढीलाइ बुझ्न अब ढिलो गर्नु हुदैन । जनताले स्वतःस्फूर्त सडकमा देखाएको शक्ती कसैले पनि नजरअन्दाज गरेर अब यो जनताको निकास हुदैन ।
अबको निकास राजसंस्था र जनताको एकता नै हो भन्ने प्रष्ट सन्देश सडकमा पोखिएको जनसागरले गरेको छ । जनताको भावना अनुसार चल्दै राजसंस्थाले समयानुकुल कदम चाल्दै अघि बढेको छ । अब जनता जागे, जनता उठे, जनता अघि बढे,मात्र राजा फर्काउन, हिन्दू अधिराज्य फर्काउन । त्यसैले जनताको मत कदर गरिनुपर्छ ।
संवैधानिक राजसंस्था र सनातन हिन्दू राष्ट्र पुन:स्थापनाका पक्षपाती राप्रपाको पछिल्लो एकीकरणपछि राजसंस्था र हिन्दू अधिराज्य पुनःस्थापनामा नयाँ राजनितीक अवस्था पनि तयार भएको छ । राजनितिक रूपमा राप्रपाको एजेण्डालाइ साथ दिन सनातन संस्कृति समाज नेपालका तर्फबाट पनि राजासहितको हिन्दूत्व फर्काउन प्रयाश भैरहेको छ ।
जनताले सनातन हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राजसंस्थालाई महत्वका साथ हेरेका छन् । संवैधानिक राजसंस्था र सनातन हिन्दू राष्ट्र नभए मुलुक रहँदैन भन्ने जनतामा प्रष्ट भइसकेको अवस्थामा ती दुवै एजेण्डा बोकेर हिंडेको पार्टी राप्रपालाई अबको वैकल्पिक शक्ति बनाउने नयाँ वातावरण बनिरहेको छ । त्यसमा राप्रपालाइ नयाँ परिस्थितिमा नयाँ अवसर पनि छ ।
जनतालाइ राजनीतिक मात्र होइन सनातन संस्कृति समाज नेपालबाट पनि संवैधानिक राजसंस्था र सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपालको एजेण्डामा जागृत बनाउन हामीले सक्रियताका साथ अभियान नै अघि बढाएका छौं । यसै सिलसिलामा देशव्यापी अभियान पनि हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौं । संसारमा राजसंस्था भएका देशहरु कति सुखी छन् भनेर हामीले जनतालाई बुझाइरहेका छौं भने सनातन हिन्दू राष्ट्र नहुँदा विदेशी धर्मको प्रभाव कति पर्दोरहेछ भन्ने कुरामा पनि जनतालाई प्रष्ट पारेका छौं । नेपालमा संवैधानिक राजसंस्था र सनातन हिन्दू राष्ट्र पुन:स्थापना हुन्छ—हुन्छ, त्यसमा जनताको साथ र एकता दिनहुँ बढ्दै गएको छ ।
विश्वमा जस्तै नेपालमा पनि कम्युनिष्टहरुले सत्ता चलाउन सक्दैनन् भन्ने करीब ३ वर्षको असफल केपी वली सरकारको बिफल सत्ताले प्रमाणित गरिसकेको छ । राजधानीमा मात्र होइन की, जनकपुर, कैलाली, सुर्खेत, लुम्बिनी, कास्कीलगायतका स्थानहरुको कार्यक्रम सकेर काठमाडौं केन्द्रीत भव्य कार्यक्रमको तयारी सनातन संस्कृति समाज नेपालबाट गर्दैछौं । देशव्यापी कार्यक्रमका दौरान जनताको उत्साहजनक सहभागिता र हौसलाले हामीलाई संवैधानिक राजतन्त्र र सनातन हिन्दू राष्ट्र पुन:स्थापना ठूलो आशा, विश्वास र भरोषा जगाएको छ । ‘सर्वधर्म समभाव’ सहितको हिन्दू राष्ट्र हामीले चाहेको हो । त्यो हिन्दू राष्ट्रभित्र सबै धर्मावलम्वीहरु अटाउँछन् ।
हामीले यो सरकारलाई घुँडा टेकाएर संसदबाटै संवैधानिक राजसंस्था र सनातन हिन्दू राष्ट्र लेखाएरै छाड्छौं । परिवर्तन जनताको चाहना नै रहेको छ । हरेक दश वर्षमा खोला पनि फर्किन्छ । मुलुकमा अहिले भएको विसंगति, विकृति र भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाउन पनि जनताले संवैधानिक राजसंस्था र सनातन हिन्दू राष्ट्रको पुन:स्थापना चाहेका छन् । १२ बुँदे दिल्ली सम्झैताबाट लादिएको यो गणतन्त्र र संघीयताको अब कुनै अर्थ बाँकी छैन । संघीयताका नामको लुटतन्त्र अन्त्य हुनु पर्छ । विदेशीसँग भिख मागेर प्रदेशका सांसद, मन्त्री, कर्मचारी किन पाल्नुपर्‍यो ? प्रदेशहरु तुरुन्त खारेज हुनुपर्छ । स्वायत्त शासन प्रणालीअनुसार गाउँपालिका, नगरपालिका र केन्द्रीय सरकार भए यो मुलुक चल्छ । संघीयताको कुनै काम छैन, संघीयता राख्नु हुँदैन । सेतो हात्ती काम न काज किन पाल्ने ?
अबको निकास राजासहितको हिन्दूअधिराज्य नै हो । २०६२/०६३ को आन्दोलनपश्चात् राजा र दलकाबीचमा जुन सम्झौता भएको थियो, त्यो सम्झौतालाई दलहरुले एकतर्फीरुपमा तोड्दा मुलुकको यो दुर्गति भएको हो । दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौताबाट दलहरु पछि हट्नै पर्छ । संवैधानिक राजसंस्था र सनातन हिन्दू राष्ट्रबेगर यो मुलुक अब चल्नेवाला छैन । राजा र दलबीच सम्झौता भएर संवैधानिक राजसंस्था र सनातन हिन्दू राष्ट्र पुन:स्थापना गर्नैपर्छ ।अहिले देशव्यापी सडकमा उर्लिरहेको जनसागरले माग गरेको पनि त्यही हो । अब जनताको शक्ती, एकता र मागलाइ कसैले पनि वेवास्ता गर्न मिल्दैन । किन भने जनता जागेपछि कहिल्यै हारेको नेपाली इतिहास छैन ।
यसैक्रममा सनातन संस्कृति समाजले यही मंसिर २५ गते राजधानीको माइतीघरमण्डलामा विशाल विरोध सभा गर्दैछ । यस विरोध सभामा सहभागि हुन म सबै हिन्दूवादी, सनातन हिन्दू धर्मावलम्वीहरूमा हार्दिक अपिल गर्दछु । सबैले मंसिर २५ मा सनातन संस्कृति समाजको व्यानरमुनी सहभागि भएर राजसंस्थासहितको हिन्दू अधिराज्य पुनःस्थापना गर्न जनदबाब सृजना गर्न योगदान दिन मेरो अपिल छ । अब सडक दबाबबाटै यो सत्ता र व्यवस्था फाल्न सबै एकजुट हुनुको विकल्प छैन । त्यसैले यही मंसिर २५ गते माइतीघरमण्डलमा भेला भइ सरकारको असफलता र व्यवस्थाको विकल्प खोज्न निर्णायक संघर्ष गर्न एकजुट बनम । राप्रपाका केन्द्रीय नेता लुइटेल, सनातन संस्कृति समाजका सहअध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
प्रकाशित: ११ मंसिर २०७७, बिहीबार ०३:५४
पार्टी हित विपरीत काम गरेको भन्दै ओलीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने प्रचण्ड-नेपाल समूहको…